Daawo: Aroos Caalami ahaa oo Farxada ka dib isku badalay Murugo iyo dhimasho ka dib markii la toogtay Aroosadii, – idalenews.com
Daawo: Aroos Caalami ahaa oo Farxada ka dib isku badalay Murugo iyo dhimasho ka dib markii la toogtay Aroosadii,
Xafladan arooska oo ka dhacday magaalada Bhopal ee wadanka Hindiya ayaa ku bilaabatay jawi farxad leh , waxaana kasoo qeyb galay dad boqolaal kor u dhaafayaya oo isugu jiray qaraabada iyo asxaabta labada lamaane.
Goobta Farxada iyo Damaashaadka arooska kasocday ayaa daqiiqado kadib isku badashay goob murugu iyo cabsi badan kadib markii si lama filaan ah loo toogtay gabadhii aroosada aheed iyada oo ugu danbeyn u geeriyootay dhaawicii halkaasi kasoo gaaray.
Jaishri Namdeo, oo ah gabar 29-jir ah ayaa waxa ay taagneyd masraha lagula mehrinayay lamaanaheeda laakinse nasiib daro waxa si kadis ah qoorta xabad ugu dhuftay wiil ay ilmo adeer ahaayeen , kadinbe waxaa loola cararay isbitaalka walow ay halkaasi ku geeriyootay.
Wiilka toogashada geeystay ayaa isku dayay inuu dilo naftiisa laakin dadkii martida ahaa ayaa ku guulaystay inay hubka ka dhigaan hadana si xun u garaacay ilaa booliska ay ku wareejiyaan.
Anurag Singh oo ah wiilkan farxada u badalay murugada ee geystay falka dilka ah uu kula kaay walaashiis ayaa sheegay inay khayaantay oo uusan raali ka
aheyn marnaba guurka gabadhan.
Warar aan la xaqiijin Karin ayaa sheegay Jaishri Namdeo iyo Anurag Singh ay hore wax iskula baran jireen, hadaba qaraabada Dr. Namdeo aya isugu soo aruuray isbitaalka la geeyay gabdhooda laakin waxa ay quusteen marka ay dhaqtiirta u sheegeen geerida Gabadhooda Namdeo.
Duqeyn Culus oo Ku Socoto Magaalada Istiraatiijiga ahe Faluuja ee Dalka Ciraaq
Caruur badan Ku Geeriyootay War-biyood Ku Taala Degmada Diinsoor